Momba anay - Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd.
Fitsapana zava-mahadomelina amin'ny abouse
Fitsapana haingana hormona
Hangzhou Testsea biotechnology co., LTD.dia orinasa teknolojia avo lenta, any Hangzhou no misy azy. Testsea dia manana mpikaroka sy mpiasa maro izay nahazo diplaoma avy amin'ny oniversite zhejiang sy any ivelany. Testsea dia manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana ary fivarotana akora ho an'ny fitiliana ara-pitsaboana sy fitsapana fiarovana ara-tsakafo. Nangataka karazana patanty 28 izahay izay mirakitra fitiliana ara-pitsaboana, fitsapana haingana momba ny fiarovana ny sakafo, immunoassay enzymatic sakafo ary fanomanana anzima vaovao. Testsea dia manome vahaolana akora tonga lafatra ho an'ny andrim-pikarohana siantifika, orinasa, andrim-pikarohana ary andrim-panjakana hafa manerantany. Testsea manontolo ny fandraharahana faritra dia mihoatra ny 2.000 metatra toradroa, anisan'izany ny 400 metatra toradroa ny GMP 100.000-atrika fanadiovana, ny orinasa dia manaraka tanteraka amin'ny ISO13485 sy ISO9001 rafitra fitantanana ny kalitaon'ny asa amin'ny fikarohana, famokarana, fanaraha-maso ny kalitao, ara-bola, varotra an-trano sy iraisam-pirenena. varotra sns. Ny vokatray dia eken'ny mpampiasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Ho fanampin'izany, dia manorina fifandraisana ara-barotra tsara amin'ny anjerimanontolo maro ao an-toerana sy ny orinasa famokarana diagnostika in vitro, na dia amin'ny Azia atsimo atsinanana, Eoropa, Afrika, Amerika Latina ary ny firenena hafa.
Testsea dia manana ekipa fikarohana sy fampandrosoana tarihin'ny dokotera sy tompo miaraka amin'ny mpiasa matihanina sy ny fitaovana tsara. Nahatratra 18g/mois ny fahafaha-mamokatra antigène recombinant.
Testsea fikatsahana ny foto-kevitra "fahamarinana, kalitao, andraikitra" ary mifikitra amin'ny kalitao, ny tanjona amin'ny fanompoana ny fiaraha-monina ary mamolavola tsy tapaka ireo fitaovana diagnostika avo lenta avo lenta.
Fitsapana diagnostika haingana ho an'ny fahavokarana, areti-mifindra, fanafody fanararaotana ary veterinera.
Ny fitiliana diagnostika haingana (RDTs) dia karazana diagnostika momba ny fitsaboana, izay midika fa ireo fitsapana ireo dia natao hanomezana valim-panadinana amin'ny fomba mety sy avy hatrany amin'ny marary raha mbola ao amin'ny tobim-pahasalamana, toerana fitiliana, na mpitsabo hafa. Ny fitsaboana amin'ny fitsaboana dia mampihena ny ilana fitsidihana marobe mba hahazoana valin'ny diagnostika, ka manatsara ny mari-pahaizana manokana momba ny diagnostika sy ny vintana hahazoan'ny marary fitsaboana, mampihena ny fiankinan-doha amin'ny fitsaboana azo antoka, ary mampihena ny risika ho voan'ny aretina alohan'ny. atao ny fitiliana marina. Ny fitsirihana haingana dia ampiasaina amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany — manomboka any an-trano ka hatrany amin'ny tobim-pitsaboana voalohany na efitrano vonjy maika -- ary maro no tsy mila fitaovana laboratoara na fiofanana ara-pitsaboana.
Fizotry ny vokatra
3. Cross membrane
4. Tapaho ny tady
6. Fenoy ny kitapo
7. Asio tombo-kase ny kitapo
8. Fenoy ny boaty
Adiresy: No.13-2 Guanshan Road, Yuhang District, Hangzhou, Shina.
Telefaonina: 400-083-7817; 0086-15355433244
Ny sandan'ny anjara Hangzhou Testsea Biotechnology Co. , LTD. Vokatra mafana - Sitemap
Kit fitiliana haingana Coronavirus Ag Canine, Feline Coronavirus Fcv Ag Test Kit, Canine Coronavirus Ag Test, Feline Coronavirus Test Kit, Fitsapana Coronavirus Feline, Kit fitsapana Coronavirus Ag Feline saro-pady avo,